न्याय माग्दै भद्रकाली मन्दिरको रुख मुनी-NepalKanoon.com
न्याय माग्दै भद्रकाली मन्दिरको रुख मुनी
नुवाकोट जिल्ला बेल्कोट गा.बि.स. वडा न. ६ बस्ने पन्चबिर लामा र उनकी श्रीमती साँइली माया लामा आफ्नी २१ बर्से जेठी छोरी शुशिला लामा को रहस्यपूर्ण मृत्यु भयपछि न्यायको लागि अहिले सहिदगेट स्थित भद्रकाली मन्दिरको रुख मुनि बसेर भोक हड्ताल गरिरहेका छन ।
उनिहरुको न्याय कता पाइने हो उनिहरुलाई नै थाहा छैन किनकि अरु यस्तै घटनामा न्याय दिने ठाउँ उनिहरुको न्याय दिने ठाउँ वन्न सकेको छैन ।
सरकारी निकाय तथा अन्य निकाय कतै बाट पनि न्याय नपाए पछी मिति २०७१l०२l३१ देखि सहिदगेट स्थित भद्रकाली मन्दिरको रुख मुनि बसेर भोक हड्ताल सुरु गरेका छन उनिहरुले l छोरी रहस्यमय ढंगले भएको मृत्युको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न भनि भोक हट्तालमा बसेका लामा दम्पतिले बताए । उनीहरु भोक हटताल बसेको आज करिव ७८ दिन भन्दा बढी भईसक्दा पनि न त सरकार ले सुन्छ न त अरु निकायलेनै भन्दै उनीहरुले दुखेसो पोखे ।
घटनाको वास्तविकता के थियो त ?
२०६५ साल मा एस.एल.सी. दिएपछि शुसिलाले कोटेश्वर घर भएका विजयमान श्रेष्ठको घरमा श्रेष्ठ कि श्रीमती स्म्रीती श्रेष्ठ सुत्केरी भएकोले स्याहार गर्ने तथा घरको सानो तिनो काम धन्दा गर्ने भनि शुसिलालाई श्रेष्ठको घरमा बोलाइयो । शुशिला कि आमा साइलीमायाले छोरी पठाउन मन्जुरी नहुदा नहुदै पनि श्रेष्ठले हामी छोरी जस्तै गरेर राख्छौ पढाई पनि दिन्छु भनेर शुशिलालाई घरमा काम गर्न ल्याए । त्यती खेर बेल्कोट मा +2 को लागि उनलाई स्कुल पनि थिएन, ठिकै छ त भनेर साइली मायाले छोरी लाई श्रेष्ठको घरमा जिम्मा लगाईन । शुशिलाले इमाडोलमा रहेको गम्विर समुन्द्र उ.मा.बि. बाट +2 पनि पास गरिन र कोटेश्वरको रत्न पब्लिक क्याम्पसमा बि.एड. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिईन ।
बिचमा साइली मायाले आफ्नी छोरीलाइ फरकाएर घर नलगेकी पनि होइनन । तर घर धनि स्म्रीती श्रेष्ठले शुशिलालाई पटक पटक फोन गरेर जागीर पनि मिलाई दिने र घरमा काम गरे बापत तलब पनि दिन्छु । तिमीलाई फाइदै फाइदा हुन्छ भनी फकाएर पुन उनकै घरमा फिर्ता ल्याँइन । तर मिति २०६९/ १०/२६ मा साँइली मायालाई स्मृतिको अचानक फोन आयो । स्मृतिले फोनमा श्रीमान र श्रीमती तुरुन्त कोटेश्वर आउन भनिन । साइलीमाँयाले किन के भयो र मेरो छोरी लाई, भन्दा यहीं आय पछि थाहा पाउछौ भनिन ।
साँझ भैसक्यो कसरी आउन सकिन्छ भन्दा तिमिहरुलाई लिनको लागि सानो सेतो कार पठाऊ छौं भनिन । साइली मायाले काठमाडौँ मै रहेका आफ्ना भाइलाई तुरुन्त फोन गरेर बुझ्न भनिन । उनका भाइले फोन गरेर शुशिलालाइ अप्ठ्यारो छ भने अस्पताल लग्दै गर्नु म आउदै छु भने । अस्पताल लग्न तिमिहरुले सिकाउनु पर्छ……….? यहि आउनु अनि थाहा पाउछौ भन्ने जवाफ आयो । राति साढे ९ बजे तिर लामा दम्पति जसो तसो अनेक दुख कष्ट र तनावमा बिजयमानको घरमा पुगे अनि लौ तिम्रो छोरी हेर भनेर उता कोठामा देखाइयो । कोठा माशुशिला झ्याल को ग्रिलमा सल को पासो लगायर झुन्डी मरेको अवस्थामा थिईन ।
साइलीमायाँको आफ्नो प्यारी छोरीको त्यो अवस्था देखिेपछि मुखबाट बाक्य फुट्न सकेन, बुवा पन्चबिरले झ्याल को ग्रिल मा अगाडी तिर डोरीको गाँठो बनायर कोहि झुनडिञ्छ फेरी एउटा खुट्टा भुइमा लतारियाको अर्को खुट्टा वेड मा राखेर कोहि मर्न सक्छ यस्तो नि हुन्छ । यो सरासर मारेर झुन्ड्याएइका हो भने । प्रहरीले तिन बजे आएर नै मुचुल्का तयार गरि सकेको रहेछ हामीलाई पक्तै छैन । पन्चबिरलाई सो मुचुल्कामा सहि गर्न भनियो । मलाई केहि थाहा छैन भन्दा केहि हैन मुचुल्का मात्र हो भनियो । पन्चबिरलाई लाग्यो यत्रो प्रसासन मेरो पक्षमा छ भन्ने लाग्यो । तर विडम्वना वास्तविकता अर्के रहेछ ।
त्यस पछि लास टिचिङ्ग हस्पिटलमा पोस्ट मार्टमक़ा लागि लगियो । पोष्ट मार्टम रिपोर्टले झन् झसङ्ग बनायो लामा दम्पतिलाई: ‘शुशिलाको पेटमा साढे तिन महिनाको गर्भ छ भन्ने खबर सुनियो’ डाक्टरले यो कुरा तपाईहरुले बाहिर नभन्दा नै राम्रो हुन्छ के गरौ भने । लामा दम्पतीले जे छ त्यही भन्न भने । तेस्पछि घर धनि बिजयमान श्रेष्ठ र बच्चाको DNA जाच गर्न आग्रह गरे DNA मिलेन भन्ने रिपोर्ट आयो भने । के थियो मिल्यो मिलेन लामा दम्पति लाई केहि थाह छैन । पुलिसले धर्म कर्मको डर तथा लालच देखाएर मृर्तकको दाह संस्कार गर्न लामा दम्पति लाई उक्साए । हो त नि है भन्ने लगेर उनिहरुले स्वययम्भुमा लगेर दाह संस्कार गरे ।
पुलिसमा पन्चबिरले मेरो छोरीलाई यौन शोषण गरि बच्चा रहे पछि सम्पति हडप्ने र अरु थप लफडा हुने डरमा घाँटी थिचेर मारेका हुन् भने, तर पुलिसले तपैले बोलेर हुन्छ कागजले जे बोल्छ त्यही हुन्छ भन्यो। DNA र SUICIDE भनेर नयाँवानेश्वर तिनकुने प्रहरी बृतले किटानी जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेन ।
छोरीको तेस्तो मृत्यु र सरकारी निकाय र प्रहरी प्रशासनकै बेवास्थाले बिरक्तियाका लामा दम्पति सरकारी वकिलकोमा गए । सरकारी वकिलले प्रहरीले जाहेरी नै ल्याएको छैन कसरि मुद्दा अगाडी बढाउने भन्दै उल्टै ठाडो जवाफ दिए । अन्तत आदिबासी जनजाती महिला संघ काठमाडौँको सम्पर्कमा आएका लामा दप्पतिको पिडा सुनेर संघले प्रहरी कार्यालय अगाडी नारा जुलुस निकाल्यो । पुलिसको दबावमा जाहेरी दर्ता गरे पनि प्रहरीले मुद्दा अगाडी नै बडाएनन । दबाब स्वरुप महिला संघले 2071/02/30 मा पत्रकार सम्मेलन गरि प्रेस विज्ञप्ती पनि निकाल्यो ।
गृहमन्त्रि समक्ष ज्ञापन पत्र पनि बुझायो । तर कतै बाट केहि उपचार भएन कसैले केहि गरेन तेस्पछि श्रेष्ठ परिवारलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेर २४ दिन पछि रिहा गरियो भनियो तर ठोस निस्कर्ष के निस्कीयो पिडित लामा दम्पति भने अनवि२ नै भए । बडो हास्यास्पद कुरो त के छ भने गज्बिर लामा भन्ने मान्छेलाई मृतकको मामा बनाएर गल्ति मृतक स्वयंकै भएकोले मिलेको भनेर प्रहरीले भन्यो तर त्यो गज्बिर भन्ने मान्छे न मृतककी आमा साइलीमायाको भाई हो नत चिनेको मान्छे नै ।
मृर्तक शुशिलाको एउटा ड्राईभर संग प्रेम सम्बन्द रहेको कुरा श्रेष्ठ परिवारले भनेपछि उसलाई ल्याएर सोधपुछ गर्दा उसको त २०५१ सालमा नै भ्यासेक्टोमी भैसकेको रहेछ त्यो व्यक्तिलाई त्यतिकै छोडियो । मृर्तकले सुसाइड नोट पनि घटनास्थलमा लेखिएको पाइयो तर किन लेखियो तथा मर्नको कारण नै खुलाएको छैन र यो नक्कली हो भनी दावीका साथ भन्छन लामा दम्पति । शक्ति र पैसा भएकाहरुले बयान, रिपोर्ट सबै आफ्नो अनुकुल बनाएर समस्याबाट सहजै भागे तर हाम्रो कुरा सुन्दिने यहाँ कोहि छैन नत प्रहरी प्रशासन नत सरकार नत अन्य सरोकारवाला निकाय भन्छन लामा दम्पति ।
पंचबिरले DNA फेरी जाँच गरि पाउ तथा श्रेष्ठ दम्पतीले के के बयान दिएका थिए लिखत हेरिपाँउ भनि प्रहरी बिर्तामा निबेदन दिए तर तिन तिन पटक जादाँ पनि प्रहरीले निबेदन समातेनन । अन्तत हुलाक मार्फत भए पनि पठाए । प्रहरी प्रशासनलाई नै दिन भनेर लेखेका तर प्रहरीले नसमातेका निवेदनको थुप्रो नै छ लामा दम्पति संग ।
मराईको प्रकृति हेर्दा र तेस्पछि भए गरेका गतिबिधि हेर्दा आत्महत्या हो भनेर भन्न कुनै हालतमा सकीदैन झुन्डिदा सलको गाँठों सिधै अगाडी पट्टि छ जुन यस्तो हुनै सक्दैन । धर्नामा बसिरहेका पिडित लामा दम्पति भन्छन छोरीको यस्तो मृत्यु देखेर गाउमा बस्नै सकेनौ । किसानको सबै काम छोडेर यहाँ आई धर्नामा बसी रहेका छौ तैपनि सरकारले सुन्दैन ।
हाम्रा लागि त सरकार, न त राज्य कोहि पनि रहेन छून यदि यो आत्माहत्या नै हो भने मेरो छोरीले आत्माहत्या गर्न को कारण के हो त, आत्माहत्या गर्दा आफ्नो कोठामा नभएर किन अर्काको कोठामा गएर झ्यालको ग्रिलमा झुन्डिएर पनि कसैले आत्मा हत्या गर्छ फेरी एउटा खुट्टा खाटमा भने अर्को खुट्टा भुइमा लतारियाको अवस्थामा थियो यो कसरी आत्माहत्या हुन सक्छ यो सरासर मारिएको हो दम्पतीको दावी छ ।
मलिन हुदै पंचबिरले भने “यसरि धर्ना बस्दा न्याए देउ भन्दा पनि सुनेन भने सरकारले हामी जे गर्छौ तेही स्मृति श्रेष्ठकै घरमा गर्छौ । हेरौ त्यतीवेला हाम्रा लागि मुखमा मलम लगाएर बसेको सरकार र प्रहरी प्रशासन कुन मुखले उसका लागि आउँदो रहेछ ।”
रुदै साइलीमाया भन्छिन यस्तो दुख कसैलाई नपरोस र यस्तो कारणले कुनै चेलीले पनि मर्न नपरोस ।
आखिर कहिले सम्म बिनाकारण हाम्रा चेली हरु यसरि मृत्युको बाटोमा जाने त…………??? खोई कानून खोई प्रहरी प्रशाशन ??
भिमवहादुर फडेरा / Nepalkanoon.com